စောင်ရန်းကိုကြည့်ခြင်းနှင့်ထင်ကြေးများ - Semalt ကျွမ်းကျင်သူ Ivan Obradovic ကဖြစ်နိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဘဏ္Financialာရေးနှင့်ဘဏ္Operာရေးလည်ပတ်မှုများ
မျက်မှောက်ခေတ်နည်းပညာအရင်းအနှီး၏ခေတ်ကာလတွင်ထင်မြင်ယူဆချက်ကို ဦး နှောက်ထဲတွင်အပြုသဘောဆောင်သောအနုတ်လက္ခဏာဆန်သော၊ ဒါပေမယ့်ဘဏ္financialာရေးထင်ကြေးတကယ်မကောင်းဘူးလား တိကျသောအဖြေမရှိပါ၊ ဒါကိုခွဲထုတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထင်မြင်ချက်၏အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ရန်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော hedging ကိုနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းတို့သည်ကွဲပြားခြားနားပြီးကွဲပြားခြားနားသောသွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်လုပ်ရပ်များပါ ၀ င်သည်။
Semalt ၏ဖောက်သည်အောင်မြင်သူမန်နေဂျာဖြစ်သူ Ivan Obradovic ကဘဏ္operationsာရေးဆိုင်ရာစွန့်စားရမှုများနှင့်ထင်မြင်ချက်များစသည့်ဘဏ္operationsာရေးဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအပေါ်ထိုးထွင်းသိမြင်သည်။
သင်စျေးကွက်၌သို့မဟုတ် OTC စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းအားဖြင့်အန္တရာယ်ရှိသည့်စတော့များကိုသင်ဝယ်ယူသောအခါသို့မဟုတ်ရောင်းချခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင် A + သို့မဟုတ်မြင့်မားသောလိုအပ်သည့်ထုတ်ကုန်များ၏အဆင့်မြင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိသော A + သို့မဟုတ်အဆင့်မြင့်အဆင့်ရှိအဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်အဆင့်ရှိအဆင့်မြင့်အဆင့်ရှိအဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဖြင့်စျေးကွက်တွင် ၀ ယ်ယူခြင်း၊ ကိုင်ထားသို့မဟုတ်တန်ဖိုးတိုးမြှင့်ရှိသည်, သင်ခြံနေကြသည်။ သငျသညျချွေတာစတော့ရှယ်ယာနှင့်အတူမည်သည့်နောက်ဆက်တွဲ offsetting မပါဘဲစတော့ရှယ်ယာဝယ်သို့မဟုတ်တိုတောင်းသောအခါ, သငျသညျပင်ကိုယ်, buzz နှင့်အတွင်းသတင်းအချက်အလက်အပေါ်မှီခိုနေကြတယ်, ဒါကြောင့်, အခြေခံအားဖြင့်, မှန်းဆ။
ဘဏ္financialာရေးထင်မြင်ချက်များသည်ကောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ ဆိုးသည်ဖြစ်စေငွေကြေးဆိုင်ရာခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ရန်ကန့်သတ်ချက်များရှိ / မရှိအပေါ်အခြေခံသည်။ အကယ်၍ အနုညာတစီရင်ခြင်းသည်အလွန်ထိရောက်ပါကစျေးကွက်အချို့သည်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်ကောင်းစွာနားလည်ထားသောဆက်ဆံရေးများ၌အကျိုးရှိလိမ့်မည်၊ သို့သော်အနုညာတစီရင်ခြင်းအတွက်အခွင့်အလမ်းအများစုကို“ စွန့်စားမှုအနုပညာ” ဟုခေါ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, တန်ဖိုးနည်းစတော့ရှယ်ယာဝယ်ယူခြင်းနှင့်တူညီသောစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အလွန်အကျွံစတော့ရှယ်ယာတိုတောင်း။ ဤစတော့များသည်အမှန်တကယ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကွဲပြားခြားနားပြီးစျေးနှုန်းအပြည့်အစုံပြောင်းလဲခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မမျှော်လင့်ပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မစုံလင်သောခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်သောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်အန္တရာယ်ရှိသည်။
ထိုနည်းတူစွာပင်၊ အချို့သောတန်ဖိုးသို့မြင့်တက်သောစတော့ဈေးကွက်ကိုလောင်းသောအခါလူများသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပေါင်းစည်းခြင်း (သို့) ဝယ်ယူခြင်းပိတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းအတွက်ကန့်သတ်ချက်များသည်အကြွေးကန့်သတ်ချက်နှင့်ပြီးပြည့်စုံသောသန့်ရှင်းသောခုံသမာဓိဖြင့်ပင်စျေးကွက်သည်သင့်အားရာထူးမှနုတ်ထွက်မည့်နည်းလမ်းဖြင့်သင်၏ခုံသမာဓိ၏အကျိုးမှမရယူမီဖြစ်နိုင်သည်။ ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, စျေးကွက်အမြဲမတတ်နိုင်သောထံမှထိရောက်စျေးနှုန်းအကွာအဝေးသို့ပြောင်းရွှေ့နိုင်ပါတယ်သော်လည်းခုံသမာဓိများအတွက်ကန့်သတ်တည်ရှိ။ ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပါ ၀ င်သောကစားသမားအရေအတွက်နှင့်အတွင်းမှသတင်းအချက်အလက်စုစည်းမှုတို့ကြောင့်စျေးကွက်သည်အတော်အတန်အကျိုးရှိသည်ဟုယုံကြည်ရန်အကြောင်းပြချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။
တချို့ကလူတွေကပြောတာကစျေးကွက်ဟာသိပ်မထိရောက်ဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကစားပွဲခုံတွေမှာထိုင်ပြီးတယ်လီဖုန်းကတဆင့်ဖောက်သည်တွေအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာအောင်လုပ်တယ်။ ထင်ရသည်မှာသူတို့၏ဖောက်သည်များသည်စျေးနှုန်းအမှန်ရရှိနိုင်သည့်နေရာကိုမသိသောစျေးနှုန်းချိုသာသူများဖြစ်သည်။ Semalt မှာအရောင်းမန်နေဂျာတစ်ယောက်လုပ်နေတုန်းကျွန်တော်ဟာစျေးနှုန်းချိုသာတဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့လုပ်ခဲ့ဖူးတာပါ၊ လူတွေကခင်ဗျားပေးတာကိုယူတာကိုငါသိပြီ
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူစျေးကွက်ထိရောက်မှုသည်အချို့သောဆက်ဆံရေးအခက်အခဲကြောင့်ဖောက်သည်တစ် ဦး အားစျေးကွက်ရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး ကစျေးနှုန်းချိုသာစွာပြသခြင်းရှိ / မရှိစျေးနှုန်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာကျနော်တို့ကုန်တိုက်စင်များသို့သွားလျှင်, ငါတို့စျေးနှုန်းများအများဆုံးသင်စျေးနှုန်းပေးဆောင်သည့်အခါသင်ရရှိသောအရာကိုရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့မျှော်လင့်ထားလိမ့်မယ်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ သင်ဟာစျေးနှုန်းချိုသာသောကြောင့်ထိုစွမ်းရည်နိမ့်ခြင်းမှသင်အမြတ်မရနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်စျေးကွက်သည်ထိရောက်မှုရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာပြောနိုင်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုထင်ဟပ်စေရန်စျေးနှုန်းများကိုသာယူပါကစျေးနှုန်းများကိုသာဝယ်ယူလျှင်စျေးကွက်သည်အကျိုးရှိသည်ဟုဆိုနိုင်သော်လည်းစျေးနှုန်းကိုညံ့ဖျင်းသောဈေးဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည်။ ဤနေရာတွင်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးကွက်ထိရောက်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ချဉ်းကပ်သည်၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှန်တကယ်စျေးနှုန်းနှင့်ခန့်မှန်းတွက်ချက်။ ဝယ်သူသည်စျေးနှုန်းချိုသာသူသို့မဟုတ်ပေးသူဖြစ်ပါကနားလည်နိုင်မှသာလျှင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
hedger နှင့် speculator အကြားအဓိပ္ပါယ်ဆက်စပ်မှုကဘာလဲ? စောင်ရန်းကိုထင်ကြေးဖို့ဆုံးရှုံးပါသလား ငါသံသယ! ကုန်ပစ္စည်းလဲလှယ်မှုများနှင့်အနာဂတ်ထင်မြင်ချက်များနှင့်ပတ်သက်သောအငြင်းပွားမှုမှာဈေးကစားသူများသည်စျေးကွက်သို့မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုစျေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်ရန်လိုအပ်နေသောစျေးကစားသူများနှင့်ဈေးကစားသူများအတွက်ငွေဖြစ်လွယ်မှုဖန်တီးနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်လေလံများမှတစ်ဆင့်ဈေးကစားသူများသည်စျေးကွက်ကိုစီးပွားရေးအရတရားဝင်အသုံးပြုမှုကိုခွင့်ပြုပေးပြီးပါတီတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင်ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းများကကုန်ပစ္စည်းများကိုခြံရံခြင်းအတွက်၎င်းသည် Archer Daniel Midlands ၏နမူနာနှင့်တူသည်။
ဤကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းကြီးများကကုန်ပစ္စည်းများသည်ခြံစည်းရိုးပေါ်သို့ ၀ င်ငွေများသည်စျေးကွက်သို့စျေး ၀ ယ်သူများ၏လက်သို့ရောက်သွားသည်ဟုထင်ကောင်းထင်ကြလိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းနှင့်လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ စောင်ရန်းကိုကာကွယ်ရန်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများနှင့်အချိန်ကာလများကိုရှာဖွေသောကြောင့် hedgers သည်စျေးကစားသူများ၏အားသာချက်ကိုယူပြီးအပြန်အလှန်မဟုတ်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ထောင့်စျေးကွက်များ၌ဈေးကစားသူများသည်စက္ကူအနာဂတ်နှင့်ကစားသောဂိမ်းများမှငွေရှာကြသည်ကိုသင်တွေ့ရသည်။ ရောင်းဝယ်မှုနှင့်အတူရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနာဂတ်ကုန်သွယ်ကုန်သွယ်သွားသည်နှင့်တူညီသောလမ်းအတွက်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်, စျေးကွက်ခြယ်လှယ်ထင်သောကြောင့်, တရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုများအများစုအတွက်ထင်ကြေးအလုပ်, လိုင်စင်လျော့နည်းစေ, အကောင့်အေးခဲခြင်းနှင့်ကြာရှည်တရားစွဲဆိုမှု။
ထင်မြင်ချက်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာအဓိကအတွေးကစျေးကွက်ကိုဂန္ထဝင်သို့မဟုတ်အမူအကျင့်နဲ့ဘယ်လိုရှုမြင်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော့်ကိုတော်တော်လေးအငြင်းပွားဖွယ်ရာကောလာဟလတွေမဖော်ပြခဲ့ခြင်းပါ။ အဓိကစိတ်ကူးကိုထည့်သွင်းဖို့အခုသီအိုရီထဲကိုနည်းနည်းလောက်လေ့လာချင်တယ်။ ငါအမြန်သတင်းအချက်အလက်ပြန့်ပွား propensity ကြောင့်ငါကုန်သွယ်၏ထိရောက်သောစျေးကွက် Hypothesis သို့မဟုတ်ဒါခေါ်ဂန္ဘဏ္financeာရေးသို့ပိုပြီးဖြစ်၏။ ငါစျေးကွက်perfectlyုံမတတ်နိုင်သောကဲ့သို့တူညီသောefficientုံထိရောက်သောမဟုတ်တူညီသောယုံကြည်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်နည်းပညာနှင့်အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏ဤသဘောသဘာဝအရအားနည်းချက်ကိုလေ့လာခြင်းနှင့်လက်ရှိအင်တာနက်လွှမ်းမိုးမှုဖြင့်အချက်အလက်ရှာဖွေခြင်းတို့နှင့်အတူလုံးဝရှိသည်။
ထို့အပြင် nullification နှင့် size effect ကဲ့သို့သောခြွင်းချက်များသည်ဂန္ထဝင်ဘဏ္financeာရေးနှင့်ဆန့်ကျင်နေသည်။ ဒါဟာသင်မှန်းဆကုန်သွယ်ဆက်ဆံသင့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၊ ကျောက်ချရပ်နားမှု၊ ကိုယ်စားပြုမှုသည်အလွန်အရေးကြီးသောအချက်များဖြစ်သည်။ စိတ်အပြောင်းအလဲများသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပြုအမူများနှင့်စတော့ရှယ်ယာအပေါ်အတက်အကျပြောင်းလဲခြင်းကိုကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်ကိုလေ့လာခြင်းသည်မည်မျှအကျိုးသက်ရောက်သည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်လူအချို့အတွက်အလုပ်ဖြစ်ပုံရသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ကြားခဲ့သည့်ဇာတ်လမ်းကိုကျွန်ုပ်ပြောပြလိမ့်မည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာ Cisco အရောင်းအ ၀ ယ်များမှအမြတ်အစွန်းရရှိခဲ့ပြီးတစ်နေ့တွင်သူသည်ပိုက်ဆံတစ်တန်ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူသည်စတော့ရှယ်ယာကိုကြည့်။ “ ဘာလဲ၊ ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာ!” သူသည် Cisco ကဲ့သို့ "သွေးထွက်သံယို Sysco" အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး dot-com ပျက်ကျမှုတွင် Cisco ပြိုကွဲသွားသည့်သတင်းပြိုကျသည်အထိသူသည်နှစ်ပေါင်းများစွာလုံးလုံးကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့်အရောင်းအ ၀ ယ်ပြုခဲ့သည်။ Thomson Reuters တွင်တစ်နေ့တာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုလေ့လာသုံးသပ်သူအဖြစ်လက်ရှိဘဏ္consultာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံအဖြစ်ခန့်မှန်းထားသည့်စွန့်စားမှုများနှင့်တစ်နေ့တာလျင်မြန်စွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်အတူဤဥပမာများစွာကိုကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ် ပို၍ မြင်လေလေ၊
စတော့ဈေးကွက်ကဲ့သို့သောစျေးကွက်များ၌အလွန်အကျွံငွေများသည် Federal Reserve နှုန်းမြင့်တက်မှုကြောင့်လူများ၏စတော့ရှယ်ယာများ ၀ ယ်ရန်သူတို့ကိုယ်သူတို့ငွေကြေးထောက်ပံ့နိုင်စွမ်းကိုထိခိုက်စေသည်။ ၁၉၂၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအတွင်းအလွန်အကျွံထင်မြင်ယူဆချက်များကြောင့်စတော့ဈေးကွက်ဈေးကွက်ကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ တွင်တူညီသောအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်မှုသည်အလွန်နည်းပါးသောပက်ကျိ“ စီးပွားရေးသမား” တိုင်းကိုအိမ်နှင့်ကား ၁၀ လုံးပိုင်ဆိုင်စေသည်။
ခေါင်းကိုက်ခြင်းများသည် dosh များကိုထိန်းသိမ်းသူများဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒီမှာငါအဆိုးမြင်တွေအများကြီး pedaling နေပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, စတော့ရှယ်ယာစျေးနှုန်းများကိုလေလံဆွဲသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်နေသည်ကိုစဉ်းစားကြည့်ကြပါစို့။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေသည်၊ ဈေးကစားသူများသည်ငွေဖြစ်လွယ်မှုကိုဖန်တီးပြီးကစားသမားကိုဈေးကွက်ထဲထည့်သွင်းသောသူများဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ဘယ်လိုကုမ္ပဏီတွေဟာစတော့ရှယ်ယာတွေကိုစျေးနှုန်းကြီးကြီးနဲ့ထုတ်ပြီးငွေရှာဖို့လွယ်ကူအောင်လုပ်နိုင်တာလဲ။
ဒါကြောင့်စတော့ရှယ်ယာများအလွန်အကျွံဝယ်ယူခြင်းသည်ပြisn'tနာမဟုတ်ပါဘူး။ အလွန်အကျွံ ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းသည်သင်၏ငွေနှင့်သင်ပြုလုပ်သောစမတ်ကျသောဆုံးဖြတ်ချက်များမှမဟုတ်ဘဲအဓိကအားဖြင့်သင့်အတွက်အလုပ်လုပ်သောစတော့စျေးကွက်မှငွေရှာသည်နှင့်ချက်ချင်းငွေပေးချေမှုစရိတ်များမှသင်၏ပြန်အမ်းငွေကိုပျက်စီးစေသည်။ အစုရှယ်ယာစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်အလွန်အကျွံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏လက္ခဏာမဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်အမြောက်အမြားကိုစီးနင်းသကဲ့သို့အမှိုက်နှောင်ကြိုးများ (စတော့ရှယ်ယာများ) ကိုစီးနင်းသကဲ့သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုညံ့ဖျင်းခြင်း၏လက္ခဏာဖြစ်သည်။ ဖက်ဒရယ်အရံနှုန်းထားများမြင့်တက်လာသောအခါကအခြေခံအားဖြင့်စတော့ရှယ်ယာများမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြှင့်တင်ရန်ငွေပြောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်လူများသည်အချုပ်အခြာအာဏာအတိုင်းအတာကိုမြှင့်တင်နိုင်မည့်အမေရိကန်ဒေါ်လာအားလုံးကိုပိုမိုဝယ်ယူလိမ့်မည်။ များစွာသောကော်ပိုရေးရှင်းငွေချေးစာချုပ်များ၏အတိုးနှုန်းကိုအစိုးရငွေချေးစာချုပ်အတိုးနှုန်းများပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားခြင်းကြောင့်အစိုးရသည်ကော်ပိုရေးရှင်းငွေချေးစာချုပ်များကိုအမြဲတမ်းသိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်
ဒါကြောင့်သင်ဟာအစိုးရရဲ့အိတ်ကပ်တွေကိုစုဆောင်းပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုထောက်ပံ့နေသည်ဟုထင်မြင်ခြင်းအားဖြင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိသောစျေးကွက်တွင်မဟုတ်ဘဲကြွေးမြီများပြားလာခြင်းနှင့်ငွေကြေးတန်ဖိုးကျဆင်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ခင်ဗျားတို့သိတာကတော့အရာရာတိုင်းဟာအတော်လေးရှုပ်ထွေးပြီးထင်မြင်ချက်တွေကကောင်းတယ်၊ မကောင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။
အချုပ်အားဖြင့်ပြောရလျှင်စီးပွားရေးအရတန်ဖိုးမတက်လာသဖြင့်ထင်ကြေးများသည်ငွေရှာရန်နည်းလမ်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်တစ်ခုသို့မဟုတ်နိဂုံးချုပ်ရမည့်အနုညာတစီရင်ခြင်းဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေရန်ခိုင်မာသောစွမ်းရည်နှင့်တူသည်။ လူတစ် ဦး သည်စျေးကွက်အကြောင်းကောင်းကောင်းသိထားလျှင်မဖြစ်နိုင်သည့်စတော့စျေးကွက်ကုန်သည်ထက် ပို၍ စမတ်ကျနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းရှိပါကခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုသည်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။
ငါနှင့်ငါ့ရဲဘော်ရဲဘက်များအနေဖြင့်အတွင်းလူသတင်းအချက်အလက်အမြောက်အများရှိခြင်းနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာစဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံအမူအကျင့်များကိုထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့်ဆုံးရှုံးမှုများစွာမရှိဘဲများစွာပိုမိုရရှိနိုင်မည်ဟူသောအတွေးကိုထောက်ခံရန်အသင့်ရှိကြသည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်လုံလုံလောက်လောက်သတ္တိရှိပြီးမှီခိုအားထားပါကအမြဲတမ်းစွန့်စားရထိုက်သည်။ ကောင်းစွာလည်ပတ်ပင်ကိုယ်နှင့်အပိုဆောင်း buzz နှစ် ဦး စလုံး။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စတော့ရှယ်ယာများ ၀ ယ်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်အကြံပြုပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်သင်စတော့ဈေးကွက်ပျက်သွားလျှင်ပင်သင်သည်စိတ်ရှည်သည်းခံခြင်းမှအောင်မြင်လိမ့်မည်၊ သင်၏ငွေသည်ကြီးထွားလာရုံမျှသာမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သူတို့ကိုလိုအပ်လျှင်၎င်းသည်သင်မလိုအပ်လျှင်၎င်းသည်များစွာကြီးထွားလာပြီး၎င်းသည်ကျုံ့လိမ့်မည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းသည် "မမြင်ရသောလက်" ကဲ့သို့အလုပ်လုပ်သည်။